देउवाको अमेरिका भ्रमणप्रति किन उठ्दैछ प्रश्न ? « Sansar News
Mon Jun 27 2022
देउवाको अमेरिका भ्रमणप्रति किन उठ्दैछ प्रश्न ?
३० जेष्ठ २०७९, सोमबार १७:०६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार दोस्रो साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा देउवा भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
यसअघि देउवाले नै नेपालको तर्फबाट २०५९ वैशाख २३ देखि २८ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरको औपचारिक भ्रमण हुन सकेको छैन ।
देउवाको भ्रमण कुन एजेण्डामा हुँदैछ भन्ने नखुलेको भएपनि एमसीसी पारित पछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको भन्ने अर्थमा सन्देश दिन खोजिएको पाइन्छ ।
भ्रमणको चाँजोपाँजो रक्षा र सेनामार्फत
अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको चाँजोपाँजो रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गरेको देखिएको छ । देउवाको भ्रमणअघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी छ । सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार शर्मा नेपाल फर्किए पछि मात्रै देउवा अमेरिका जानेछन् ।
अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमण पनि देउवाको भ्रमणसँग जोडेर अथ्र्याइएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन बिहीबार ४ दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेका थिए । उनले यहाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
अमेरिकी सेनाको एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन प्रधानमन्त्री देउवासँगकाे शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा ।
श्रृंखलाबद्ध उच्च अधिकारीको भ्रमण
सरकारले विवादित रुपमा हेरिएको अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई पारित गरिसकेको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गरिएयता अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको देखिन्छ ।
यही जेठ ६–८ मा तिब्बती मामिलासमेत हेर्ने अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जियाले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनीसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीकी एसियाका लागि उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर पनि आएकी थिइन् ।
यसअघि सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सांसदको ५ सदस्यीय टोलीले वैशाख ९–११ मा नेपाल भ्रमण गरेको थियो । दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ वैशाख ६ मा आएर पर्सिपल्ट फर्किएका थिए ।
लगातार अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण र अमेरिकी सेनाको एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुखको भ्रमण पछि देउवाको अमेरिका भ्रमण हुन लागेको छ । राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाइएको भ्रमणप्रति कुटनीतिक वृत्तमा इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्ससँग भ्रमणलाई जोडेर हेरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्रै होइन सत्तापक्षकै नेताहरुले भ्रमणप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । एमालेले संसदबाट औपचारिक रुपमै भ्रमणबारे जानकारी माग गरेको छ ।
“प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदैछ कि रक्षामन्त्रीको ? रक्षामन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने यसको ‘स्ट्याचर’ के हो ?”, आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले प्रश्न गरेका थिए, “यसबारे यथासक्य सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ ।”
एमालेले उज्रा जियाको नेपालभ्रमणप्रति यसअघिदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । पछिल्लो चरणमा भएको अमरिकी सेनाको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुखको भ्रमणप्रति पनि एमालेले प्रश्न उठाइरहेको छ । एमालेका सांसद भीम रावलले देउवाको भ्रमण अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डलाई नेपालमा ल्याउने योजना त होइन भनि प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु अहिले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा भएको सहभागिताप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि देउवाको भ्रमण इण्डो प्यासिफिक एलाइन्समा आबद्ध हुने तयारी स्वरुप गरिएको रुपमा व्याख्या गर्दछन् । “जे–जसरी अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण भएको छ र त्यहि घटनाक्रममा बीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ यसले प्रश्न उठाएको छ । कतै इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्समा त जान खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न छ”, श्रेष्ठले भनेका छन्, “असंलग्नताको नीतिबाट पर जानु हुँदैन, कुनै कित्तामा उभिएर हाम्रो सुरक्षा हुँदैन ।”
भारतमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन १७…
पाकिस्तानमा अस्पताल भर्ना हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि
रुसद्धारा थप ४३ क्यानेडियालीलाई आफ्नो इलाका प्रवेशमा प्रतिबन्ध
मोबाइलमा चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु
मकैबारीमा काम गरिरहेकी आमाको धारिलो हतियार प्रहार गरेर…
सरकारले अमेरिकालाई पठायो एसपीपी अस्वीकार गरिएको पत्र
युद्धमा मिसियो बेलारुस, रुसको पक्ष लिँदै युक्रेनमाथि हान्यो मिसाइल
काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध पाँचौं महिनामा चलिरहेको छ । लम्बिदोँ युद्धमा रुस
फैलिदै छ हैजा, डा. पुन भन्छन्–यी तीन कुरामा मुख्य ध्यान…
असारको पहिलो साता बागबजारका २ जनामा देखिएको हैजा त्यसको एकसातामै १२ जनामा पुष्टि भएको
पर्वतारोहण संघले प्रकाशको सालिक बनाएपछि प्रचण्ड तनावमा !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को छोरा प्रकाश दाहालको ककनीमा